Ringlock System ကို Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ - တရုတ် Ringlock System ကို Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ပေးသွင်း, စက်ရုံ - FSD
က Round ပုဒ်မပိုက်
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးကွိုင် & စာရွက်
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » ငြမ်းစနစ်
Ringlock System ကို Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့
ယခင်: Ringlock System ကို Fixed / ဆုံလည်အခြေစိုက်ဂျက်
နောက်တစ်ခု: Ringlock စနစ်ဘေးထွက်ကွင်းပိတ်
Ringlock ငြမ်းအားလုံးအဆောက်အအုံနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ထောက်ခံမှုအဆောက်အဦများ၏ပုံစံများ, သင်္ဘောကိုအဆောက်အဦ, ကမ်းလွန်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့် multi-ရည်ရွယ်ချက် modular ငြမ်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
ငြမ်းအရေးပါသောသပ်သုံးပြီးစုဝေးကြသည်သွပ်ရည်စိမ်မြင့်မားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ modular အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည် FSD Ringlock စနစ်ကစနစ် :. သံမဏိပျဉ်ပြား, ဘက်ကွင်းစနစ်ခြေချောင်းပျဉ်ပြား, လှေကား, လှေကားနှင့်လယ်ဂျာစာအုပ်တွေဖြည်အပါအဝင် accessories များတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံအကွာအဝေးရှိပြီး connectors ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပိုမိုဘေးကင်းလုံခြုံရေး, ဝန်ဆောင်မှုအသက်, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှခုခံဘို့တည်နေကြတယ်အဖြစ်, FSD ringlock system ကိုငြမ်းပလီကေးရှင်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့စုံလင်သည်။
ဒီ ringlock စနစ်ကငြမ်းပေါင်းစပ်လယ်ဂျာနှင့်မသန်စွမ်းပဲရှစ်ကွန်နက်ရှင်များမှတက်လိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ်။ သည်ဤဆက်သွယ်မှုများကိုတစ်ခုချင်းစီလုံခြုံစွာ 11.12kN (2500LBS) ၏ဝန်သယ်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော်လယ်ဂျာဝန်၏စုစုပေါင်းပေါင်းပေးထားသော Brace အခွအေနအဘို့အကြံပြုခြေထောက်ဝန်ထက်မကျော်လွန်ရပေမည်။
Ringlock system ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း
တိုးဘုတ်အဖွဲ့ Interlocking: ပလက်ဖောင်းပယ်ကျသွားမှသေးငယ်တဲ့ tools တွေကိုနှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာကုန်းပတ်အဆင့်မှာပင်လယ်အော်ခိုင်ခံ့ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ .65m / 2'2 "
Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ .88m / 2'9 "
Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ .91m /3''
Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ 1.065M / 3'6 "
Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ 1.15m / 3'10 "
Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ 1.21m /4''
Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ 1.52m /5''
Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ 1.57m / 5'2 "
Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ 1.82m /6''
Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ 2.13m /7''
Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ 2.43m / 8 ''
Interlocking တိုးဘုတ်အဖွဲ့ 3.05m / 10 ''
လှေကား & bracket က
Ringlock System ကိုငြမ်းပိုက် Fittings
ပူပြင်းတဲ့သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိပိုက်နှစ်ပြီးသော
သံမဏိ Tube စက်ရုံများတွင်သံမဏိပိုက်
Ringlock System ကိုငြမ်း
Ringlock System ကိုငြမ်း Tube ပိုက် 48.3mm
Ringlock System ကိုဒေါင်လိုက် / အခြေစိုက်စခန်းကော်လာ / rosette Clamp
Ringlock System ကို Ledger
Ringlock System ကိုထောင့်ဖြတ်ဂလားပင်လယ်အော် Brace / Clamp Brace
Ringlock System ကို Hook ငြမ်းပျဉ်ပြား
Ringlock System ကို Fixed / ဆုံလည်အခြေစိုက်ဂျက်
Ringlock System ကိုလှေခါးထစ်စနစ်
Ringlock System ကိုငြမ်း Ladder
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး OEM ဖန်လုံအိမ် System ကိုသံမဏိ Frame ကဖန်လုံအိမ်
OEM Chain Link ခြံစည်းရိုး
OEM Chain Link ခြံစည်းရိုးအထည်အလိပ်
OEM Chain Link ခြံစည်းရိုး Galvanzied Post ကို
OEM Chain Link ခြံစည်းရိုးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
OEM PV သစျပွုပွငျပံ့ပိုးမှု
သံမဏိ Tube စက်ရုံထဲမှာက Black က Round ပုဒ်မပိုက်
သံမဏိ Tube စက်ရုံခုနှစ်တွင် ERW သံမဏိပိုက်
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. သံမဏိ Tube
ကာဗွန်သံမဏိပိုက်သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ.
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. မြို့ပတ်ရထား Hollow ကဏ္ဍများ
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. ဆွန်းပုဒ်မက Round Tube
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. Structual ပိုက်
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. သတ္တု Tube
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. သတ္တုပိုက်
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. ပိုက် welded
ပူပြင်းတဲ့သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. သံမဏိပိုက်ရှင်းပြီ
သံက Tube / ပိုက်သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ.
Black ကသံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. သံမဏိပိုက်ပန်းချီ
အကြိုသွပ်ရည်စိမ်က Round ပုဒ်မပိုက်သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ.
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. အကြိုသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိပိုက်
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. အကြိုသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. အကြိုသွပ်ရည်စိမ် Tube
ပူပြင်းတဲ့သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. သွပ်ရည်စိမ်က Round ပုဒ်မပိုက်နှစ်ပြီးသော
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. Galvanizing hot-Dip
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. hot-Dip သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ
ပူပြင်းတဲ့ Dip သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. သံမဏိပိုက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံမဏိပိုက်လုံး
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. သံပိုက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. Tubo Galvanizado
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. သွပ်ရည်စိမ် Tube
ပူပြင်းတဲ့ Dip Galvanised ပိုက်သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ.
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. ဟော့ Dip Galvanised Tube
ပူပြင်းတဲ့ Dip Galvanised ပြွန်သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ.
သံမဏိ Tube စက်ရုံ မှစ. ဟော့ Dip သွပ်ရည်စိမ်ပိုက်
ရင်ပြင် & Rectangular Hollow S ကို
ဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပိုက်စက်ရုံ မှစ. Black က Rectangular Hollow ပုဒ်မ
ဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပိုက်စက်ရုံ မှစ. RHS Tube
ဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပိုက်စက်ရုံ မှစ. rectangular သံမဏိပိုက်
ဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပိုက်စက်ရုံ မှစ. rectangular သံမဏိ Tube
အကြို welding Tube စက်ရုံ မှစ. ရင်ပြင် Hollow ပုဒ်မအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
Tube စက်ရုံ welding မှစ. အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးရင်ပြင် Hollow ကဏ္ဍများ
Tube စက်ရုံ welding မှစ. Square ကိုပိုက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
Tube စက်ရုံ welding မှစ. ရင်ပြင် Tube အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
အကြို welding Tube စက်ရုံ မှစ. Square ကိုပိုက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
Tube စက်ရုံ welding မှစ. အကြိုသွပ်ရည်စိမ်ရင်ပြင် Tube
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Rectangular Hollow ပုဒ်မ welding Tube စက်ရုံ မှစ. pre
Tube စက်ရုံ welding မှစ. အကြိုသွပ်ရည်စိမ် Rectangular ပိုက်
Tube စက်ရုံ welding မှစ. သွပ်ရည်စိမ် Rectangular Tube
Tube စက်ရုံ welding မှစ. အကြိုသွပ်ရည်စိမ် Rectangular ပုဒ်မ
ပူပြင်းတဲ့ဂဟေဆော်ခြင်းပိုက်စက်ရုံ မှစ. သွပ်ရည်စိမ်ရင်ပြင် Hollow ပုဒ်မနှစ်ပြီးသော
ဂဟေဆော်ခြင်းပိုက်စက်ရုံ မှစ. ဟော့ Dip Glavanized ရင်ပြင် Hollow ပုဒ်မ
ဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပိုက်စက်ရုံ မှစ. က Black ရင်ပြင် Hollow ပုဒ်မ
ဂဟေဆော်ခြင်းပိုက်စက်ရုံ မှစ. သွပ်ရည်စိမ် RHS
ဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပိုက်စက်ရုံ မှစ. က Black Box ကိုပိုက်
ပူပြင်းတဲ့ Dip ဂဟေဆော်ခြင်းပိုက်စက်ရုံ မှစ. Square ကိုပိုက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
ဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပိုက်စက်ရုံ မှစ. Square ကိုသံမဏိ Tube
ဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပိုက်စက်ရုံ မှစ. Square ကိုသံမဏိပိုက်
ဂဟေဆော်ခြင်းပိုက်စက်ရုံ မှစ. RHS Tubo Galvanizado
ပူပြင်းတဲ့ဂဟေဆော်ခြင်းပိုက်စက်ရုံ မှစ. သွပ်ရည်စိမ် Rectangular Hollow ပုဒ်မနှစ်ပြီးသော
ဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပိုက်စက်ရုံ မှစ. က Black Square ကိုပိုက်
ဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပိုက်စက်ရုံ မှစ. က Black Square ကိုသံမဏိပိုက်
ပူပြင်းတဲ့ Dip ဂဟေဆော်ခြင်းပိုက်စက်ရုံ မှစ. Rectangular ပိုက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
ဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပိုက်စက်ရုံ မှစ. က Black ရင်ပြင် Tube
ဂဟေဆော်ခြင်းပိုက်စက်ရုံ မှစ. hot-Dip သွပ်ရည်စိမ် Rectangular Tube
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. သွပ်ရည်စိမ် coil
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ coil
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. Galvanised coil
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. Galvanised သံမဏိ coil
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. Galvalume coil
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. Galvalume သံမဏိ coil
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. Alu-သွပ်သံမဏိရေနံ
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. မြှောင်းပုံခေါင်မိုးစာရွက်
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. မြှောင်းပုံစာရွက်
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. အမိုးမိုး Tile
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. Galvanised စာရွက်
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. သွပ်ရည်စိမ်စာရွက်
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. Tuile
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. YX25-205-820
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. YX25-205-1025
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. PPGI
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. Prepainted Galvanised သံမဏိ
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. အရောင်သွပ်ရည်စိမ်စတီးကွိုင်
သံမဏိစက်ရုံ မှစ. Prepainted သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ
မိုဘိုင်း: + 86-13821653263
Skype ကို: jackiefighting
Post ကိုကုဒ်: 300384
နေရပ်လိပ်စာ: Caigongzhuang စက်မှုလက်မှုဇုန်, Jinghai နိုင်ငံ, Tianjin မြို့, တရုတ်။
Add: Caigongzhuang စက်မှုလက်မှုဇုန်, Jinghai နိုင်ငံ, Tianjin မြို့, တရုတ်။
ဖက်စ်: + 86-22-23755759
ယခုသတင်းလွှာ sign up ပြုလုပ်ပါ!
Tianjin Fushunda သံမဏိစက်မှု Co. , Ltd မှ
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, e-mail ကိုစုံစမ်းရေးပေးပို့နိုင်ပါသည်